हाम्रो सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ११ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न - Gandaki Sandesh
हाम्रो सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ११ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
पोखरा महानगरपालीका वडा नं ९ मा रहेको हाम्रो सहयोगी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ११ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सहकारीका अध्यक्ष शुक्रराज कंडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको उद्धघाटन जिल्ला सहकारी संघ कास्कीका अध्यक्ष रविरमण तिवारीले गरेका थिए । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तथा सहकारी बिभाग सदस्य राधिका शाही योगी, संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङ, निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद सापकोटा, लेखा समिती सदस्य रामचन्द्र पोख्रेल लगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए । सल्लाहकारहरू, कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, विभिन्न उपसमिति संयोजक एवं सदस्यहरू, उपस्थिति रहेता पनि बिश्वब्यापी रपमा फैलिरहेको कोभिड १९ को कारण स्वास्थ्यको परिधी भित्र रहदै सानो संख्यामा कार्यक्रम सम्पन्न गरियको संस्थाका अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । कार्यक्रमको सञ्चालन सहकारीका सहसचिव कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले गरेका थिए ।
पाईप बाट तेल आयो अब ग्यास कहिले ?
२४ भदौ, काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनको उदघाटन गरेका छन् । ओलीले सिंहदरबार र मोदीले दिल्लीबाट स्विच... Read More
सहकारी संस्था द्धारा आलुको बीऊ वितरण
अन्नपूर्ण–६, लुम्ले स्थित कान्छी बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले द्धारा आलुको बीऊ वितरण गरेको छ । सहकारीले सहकारीमा आवद्घ अति विपन्न र विपन्न शेयर सदस्यलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले... Read More
सरकारद्वारा तोकियो जग्गाको मुल्य ? कहाँको कति ?
काडमाडौं । काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रको जग्गाको सरकारी मूल्य तोकीएको छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रको जग्गाको सरकारी मूल्य तोकेको हो। सरकारले तोकेको रेटभन्दा कममा कारोबार भएको देखाएर सोही अनुसारको कर... Read More
काठमाडौं, १ कात्तिक । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले रोक्न... Read More